IBlackmagic Design Imemezela Amamodeli Amasha We-Micro Micro 3G | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » IBlackmagic Design Imemezela amamodeli amasha we-Micro Micro 3G XNUMXG
IBlackmagic Design Imemezela amamodeli amasha we-Micro Micro 3G XNUMXG
IFremont, CA, eU.SA - ngoLwesine, Novemba 19, 2020 - I-Blackmagic Design namuhla umemezele umndeni omusha wezinhlobo zeMicro Converter 3G ezivumela amakhasimende ukuthi asebenzise I-HDMI imishini enezinhlelo zobuchwepheshe ze-SDI. Lawa amamodeli amasha afaka i-hardware yangokwezifiso eyenziwe ngu- I-Blackmagic Design futhi kufaka phakathi izici ezazitholakala kuphela kuma-high end converter. Izinhlobo zeMicro Converter 3G zifaka phakathi izinto ezinjengama-3D LUTs namafomethi wevidiyo amaningi kunamamodeli amadala azishintshayo.
Izinhlobo zeMicro Converter 3G ziyatholakala ngokushesha kusuka ku- I-Blackmagic Design abathengisi emhlabeni wonke kusuka ku-US $ 45.
Izinhlobo ezintsha zeBlackmagic Micro Converter 3G zingamaguquli amancane kakhulu okusakaza amavidiyo avumela amakhasimende ukuthi axhumane phakathi komthengi I-HDMI nemishini ye-SDI yobuchwepheshe. Umklamo omangelengele nowenziwe ngezinto ezincane uzenza zibe zincane ngokwanele ukuthi zisetshenziswe noma kuphi. Amakhasimende uthole ubuchwepheshe Ukuxhumeka kwe-3G, SDI kokusebenza nayo yonke i-SD kanye HD ifometha kuze kufike ku-1080p60. Ama-Micro Converters asebenzisa i-USB ngamandla, ngakho-ke anganikwa amandla ngqo kusuka kumathelevishini noma kumakhompyutha aphathekayo. Amakhasimende angakwazi ngisho nokuwathenga ngaphandle kwamandla kagesi uma engadingeki. Kuphela amaBlackmagic Micro Converters afaka i-elekthronikhi eyakhiwe ngokwezifiso ehambelana nokucaciswa kwamanje kokusakazwa komhlaba, futhi engabuyekezelwa emazingeni amasha ngokuzayo.
Ngoba zisezingeni eliphakeme ngokwedlulele, amakhasimende angabathemba kuzo zonke izinhlobo zokusakaza, ukukhiqiza bukhoma nasekusebenziseni okusethiwe. Zisebenzisele ukuguqula noma yikuphi ukukhonjiswa kwekhompyutha, ithelevishini noma iphrojektha yevidiyo ekuqapheni okusabalalisiwe kwekhwalithi ephezulu. Futhi zilungele ukuguqula ifayela le- I-HDMI Imiphumela yamakhompyutha namakhamera evidiyo wabathengi kumishini ephezulu ye-SDI. Cabanga usebenzisa umbukiso wesilayidi osebenza kukhompyutha ukuthola izihloko zekhwalithi ephezulu yokusakaza ekukhiqizeni bukhoma. Amakhasimende angakwazi ngisho nokuwasebenzisela ukwelula isikhathi eside I-HDMI amabanga asebenzisa i-SDI.
Ngokungafani nabanye abaguquleli abancane be-SDI, iBlackmagic Micro Converters ifaka ubuchwepheshe bokusakaza obusezingeni eliphakeme kakhulu, obuncitshiswe endaweni ebiyelwe yensimbi eqinile. Isiguquli ngasinye inezimboni standard 3G, SDI kanye I-HDMI ukuxhumana ngezixhumi eziqinile zekhwalithi ephezulu. Ama-Blackmagic Micro Converters afaka ukuxhumeka kwamandla we-USB, kanye nokushintsha izilungiselelo nge-utility converter ku-Mac naku-Windows. Ngoba i-USB inika amandla isiguquli, amakhasimende angakwazi nokuyinika amandla kusuka kumathelevishini noma kumakhompyutha aphathekayo. Kukhona ngisho nama-LED amandla nesimo sevidiyo. Amakhasimende angaphinda futhi athenge iBlackmagic Micro Converters ngamandla ka-AC kufaka phakathi ama-adaptha ama-4 asetshenziswa emazweni aphesheya.
Ngokungafani nabaguquli abashibhile, iBlackmagic Micro Converters ifaka ukucutshungulwa kwesiginali esezingeni eliphakeme kanye nepayipi levidiyo elijule kancane. Ama-Micro Converters aklanywe ngobuchwepheshe be-elektroniki ukuze amakhasimende athole ama-jitter we-SDI aphansi kakhulu, avumela amakhasimende ukuthi anwebe izintambo ze-SDI emabangeni amade. Lokho kubalulekile ekukhiqizeni bukhoma lapho imishini enjengamakhamera ingaba ibanga elide ukusuka kwabashintshi. Ama-Blackmagic Micro Converters asebenza ngawo womabili amafomethi wevidiyo we-8 no-10 ‑, ku-RGB noma ku-YUV, nakuyo yonke i-SD kanye HD ifometha kuze kufike ku-1080p60. Baze basekele ama-1080p24, 1080p47.95 kanye nama-1080p48 amazinga amafilimu. Amakhasimende angaphezulu athola ukwesekwa okushunyekwe ngokuphelele komsindo ne-timecode.
Amakhasimende nawo angashintsha amasethingi futhi abuyekeze isoftware yokuguqula ngesisetshenziswa samahhala sokuguqula esingalandwa kufayela le- I-Blackmagic Design iwebhusayithi. Le software ixhuma ekuxhumekeni kwe-USB kuma-Micro Converters futhi isebenza kuwo womabili amakhompyutha we-Mac ne-Windows. Amakhasimende angasebenzisa insiza ukuguqula igama lokuguqula, elingaba wusizo ekuboneni ukuthi isiphi isiguquli esisetshenziselwa umsebenzi. Lapho usebenzisa isiguquli sokubhida, amakhasimende angakwazi nokusetha inombolo yekhamera, ngakho-ke isiguquli siyazi lapho silawulwa kusuka kusishintshi sokukhiqiza bukhoma. Amakhasimende angakhetha futhi phakathi kwezinga A no-B kokukhishwa kwevidiyo ye-3G-SDI.
I-Micro Converter SDI ukuze I-HDMI Imodeli ye-3G ifaka phakathi ne-3D LUT yokuqapha okunembile kombala. Amakhasimende angafaka ukubukeka okwenziwe ngokwezifiso, umbala noshintsho lwe-gamma ngesikhathi sangempela sokuqapha okusethiwe. Ama-LUT nawo angasetshenziswa kokukhishwa kwe-3G ‑ SDI loop, okuvumela amakhasimende ukuthi asebenzise isiguquli njengeprosesa ye-3D LUT. Amakhasimende angasebenzisa futhi ama-3D LUTs ukuthola isilawuli sokulinganisa esilinganiswe ngombala besebenzisa i-computer ebiza izindleko ephansi noma i-TV. Amakhasimende angasebenzisa ngisho ne-DaVinci Resolve corrector eyinhloko yombala ukudala ukubukeka okumangazayo bese uwagcina njengama-3D LUTs wangokwezifiso. Ngoba iDaVinci Resolve ingalandwa mahhala, akubizi lutho ukuqala ukudala umhlaba wama-3D LUTs wokuqapha. Cabanga ukukhiqiza kabusha amasheya amadala amafilimu.
The Micro Micro BiDirectional SDI /I-HDMI Imodeli ye-3G isekela nokulawulwa kwekhamera ngakho-ke amakhasimende ingasebenzisa iBlackmagic Pocket Cinema Camera nge-ATEM SDI switch. Abashintshi be-ATEM bathumela ukulawula kwekhamera phezu kwe-SDI, futhi isiguquli singakuhumushela lokhu ku- I-HDMI yekhamera. Vele uxhume i-SDI kusuka kwisiguquli kuye kokufaka kwesishintshi, uhlelo lweswishi luye kokufakwayo kwesiguquli, bese kuba I-HDMI okokufaka kokuguqula kuxhuma ku-Pocket Cinema Camera. Manje engeza inombolo yekhamera ekusetshenzisweni kwesiguquli futhi abasebenzisi bazothola ukulawulwa kwesilungisi sombala wekhamera, ngokulinganisa kanye nokurekhoda okukude. Isebenza ngisho nangokubuyela emuva futhi amakhasimende angaxhuma futhi alawule ikhamera ye-SDI kusuka ku I-HDMI iswishi efana ne-ATEM Mini.
Izinhlobo ezintsha zeMicro Converter 3G zisebenzisa i- new I-Blackmagic Design ukwakhiwa kwehadiwe ngokwezifiso ngakho-ke bathuthuke kakhulu ukuxhasa kangcono izici zobuchwepheshe ezibucayi ekusakazeni okuphezulu kokuhamba komsebenzi. Lezi zici zifaka ukusekelwa kwe- I-HDMI nokuguqulwa kwekhodi yesikhathi ye-SDI. Amakhasimende aze athole ukwesekwa okugcwele kwe-timecode kuzona zombili izincazelo ezijwayelekile namafomethi wevidiyo encazelo ephezulu. Lokhu kusho ukuthi uma amakhasimende anakho I-HDMI idivaysi esekela i-timecode, amakhasimende angayiguqula ibe yi-SDI bese enza leyo khodi yesikhathi ibe yizinhlelo ezinkulu zokusakaza.
Ama-Blackmagic Micro Converters afaka phakathi okwakhiwe kuma-SDI kabusha iwashi kokukhiphayo kwe-3G - SDI. Ukufakwa iwashi kabusha kwe-SDI kuzovuselela ividiyo ye-SDI, kunciphise i-jitter ye-SDI futhi kuthuthukise iphethini yamehlo e-SDI ngaphambi kokuthi isiguquli sithumele isignali kweminye imishini. Lokhu kuvumela ubude bekhebuli obude ngoba ngisho namasiginali we-SDI owehlisiwe asengasetshenziswa. Abanye abaguquli bavame ukushiya izinto ezibalulekile njengokufaka iwashi kabusha ngakho-ke azithembeki ekusetshenzisweni kokusakaza. IBlackmagic Micro Converters nayo iyathobela ngokuphelele SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE Izinga le-425M A no-B, amazinga okusakaza.
Izinhlobo zeBlackmagic Micro Converter 3G zisekela amafomethi we-SDI afaka phakathi ama-525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94 , 1080p60, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 .2 DCI ne-59.94Kp2 DCI, 60KPsF2 DCI, 25KPsF2 DCI ne-29.97KPsF2 DCI. I-HDMI amazinga wevidiyo afaka phakathi i-525i59.94 NTSC, i-625i50 PAL, i-720p50, i-720p59.94, i-720p60, i-1080p23.98, i-1080p24, i-1080p25, i-1080p29.97, i-1080p30, i-1080p50, i-1080p59.94, i-1080p60, i-1080i50, i-1080i59.94 ne-1080i60. Izinga le-3G no-B le-XNUMXG liyasekelwa.
Izinhlobo ezintsha zeBlackmagic Micro Converter 3G zinikwa amandla ngoxhumo olufanayo lwe-USB ‑ C olusetshenziswa kumakhompyutha amasha nakuma-smartphones ukuze amakhasimende akwazi ukunika amandla okuguqula kusuka kumabonakude afanayo noma amakhasimende ekhompyutha aguqulela ividiyo. Amakhasimende angaphinde athenge ama-Micro Converters ngamandla we-AC asekela i-100 kuye ku-240V AC futhi eza nayo I-4 ehlukile Ama-adaptha esokhethi e-AC ukuze amakhasimende akwazi ukuwaxhuma ezitolo noma kuphi emhlabeni. Lokho kulungele lapho abasebenzisi benza umsebenzi wamazwe omhlaba. Amakhasimende angasebenzisa ngisho namashaja we-smartphone namaphakethe webhethri angagcwaliseka kabusha ukunika amandla ama-Micro Converters kusethi.
"Ama-Micro Converters ethu athandwa kakhulu futhi lawa ma-modeli amasha manje asebenzisa idizayini yangokwezifiso esebenzisa iBlackmagic OS ngakho-ke manje sesingafaka ezinye izinto eziningi kunalezo amamodeli amadala angazisekela ngoba lezi zinhlobo ezintsha zihlakaniphile," kusho uGrant Petty, I-Blackmagic Design Umphathi omkhulu. "Sicabanga ukuthi amakhasimende azothanda lezi zinhlobo ezintsha futhi silangazelela ukukhipha izibuyekezo ezintsha ze-software njengoba singeza ezinye izici ezintsha!"
Izici zeMicro Converter 3G Model
Idizayini encane kakhulu yokusebenza okuphathekayo.
Isekela ukuthuthukisa isoftware ngoxhumano lwe-USB.
Kufaka phakathi i-3D LUT yokuqapha ku-SDI to I-HDMI Imodeli.
Kufaka nezici zokulawulwa kwamakhamera ezishintshi zeBlackmagic ATEM.
Isekela i-3G-SDI ne I-HDMI amazinga wekhodi yesikhathi.
Ifaka ubuchwepheshe be-3G-SDI obakhelwe kuma-SDI kabusha iwashi.
Isekela wonke amazinga wevidiyo ku-NTSC, PAL, 720 HD futhi 1080 HD.
Amamodeli angathengwa ngamandla kagesi noma ngaphandle kwawo.
Izinhlobo zeMicro Converter 3G sezitholakala manje zisuka ku-US $ 45, ngaphandle kwentela yendawo nezintela, kusuka I-Blackmagic Design abathengisi emhlabeni wonke.
Izithombe zomkhiqizo wamaModeli we-Micro Converter 3G, kanye nawo wonke amanye I-Blackmagic Design imikhiqizo, iyatholakala ku www.blackmagicdesign.com/media/images.
I-URSA Broadcast Ibamba i-ITV ethi "Thanda Impelasonto Yakho no-Alan Titchmarsh" - Novemba 30, 2020
I-Blackmagic Design IMicro Converter 3G 2020-11-19
Ngaphambilini: Iteyili lithembele ku-Blackmagic RAW Workflow
Olandelayo: I-Streamliner Productions iba yinto yokuqala efihla i-xR Partner eNew Zealand